Farmaajo oo abuuraya qalalaaso siyaasadeed oo hor leh | KEYDMEDIA ENGLISH
Farmaajo oo abuuraya qalalaaso siyaasadeed oo hor leh
Wuxuu la yaab ku tilmaamay in shir looga hadlayo Amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka oo aysan qayb ka ahayn, Ra’iisul Wasaaraha iyo Wasiirrada Amniga iyo Gaashaandhigga, uu MW hore la qaato saraakiil ciidan, iyadoo lagu ganbanayo sugid amni.
MUQDISHO, Soomaaliya - Hoggaamiyaha Xisbiga Ilays , Musharrax Madaxweyne Cabdulqadir Cosoble Cali, ayaa sheegay in Farmaajo u istaagay isku day kale, oo qalalaaso abuur ah, si uu u carqaladeeyo hannaanka gabagabada ku dhow ee doorashooyinka.
Cosoble, wuxuu shaki weyn ka muujiyay, kulan uu dhawaan Farmaajo la qaatay taliyayaal ciidan oo isaga ka amar qaata, kuwaas oo qeyb ka ahaa mushkidda siyaasadeed ee muddada soo taagneyd, wuxuuna carabaabay inuu socdo abaabulka qalalaaso hor leh.
Wuxuu xusay in shanti sano ee la soo dhaafay Farmaajo gubay, dhammaan kaararkiisii siyaasadeed, isla-markaana aysan jirin, wax sharciyad ah oo uu heysto, wuxuuna is weydiiyay sababya saraakiishu waqti ugu laminayaan haddii uusan abaabul socon?
“Kulankiisu ma ahayn mid dimuqraadi ah oo loo dhan yahay, kulan sawir fiican bixinayana ma ahayn. Taa beddelkeeda, waxuu u ekaa isku-day kale oo qalalaase abuur ah, waana ka digeynaa”. Ayuu yiri Cabdulqadir Cosoble Cali.
Cosoble, shanti sano ee la soo dhaafay si weyn ayuu uga soo hor jeeday Farmaajo, waxaase xusid mudan in doorashadii billowgii 2017, uu 25 cod siiyay Farmaajo, kadib markii uu ku haray wareeggii koobaad ee tartanka.